Ugogo uzibelethele umzukulu | News24
Ugogo uzibelethele umzukulu
Plano, Texas - Owesifazane waseNorth Texas ubelethe umzukulu wakhe ngemuva kokuthwalela indodakazi yakhe ingane.
UTracey Thompson, 54, wasePlano ubelethe ingane yentombaznae ngemuva kokuthwalela ingane yakhe yentombazane eneminyaka engu-28 ubudala uKelly McKissack.
Odokotela eMedical Center yasePlano bathi uMcKissack nomyeni wakhe u-Arron sebaphuphunyelwa yizisu kathathu kulandela ukuthatha imishanguzo yokuvundisa isibeletho.
OLUNYE UDABA: Isalukazi, 65, sikhulelwe amawele amane
Ngokusho kwesitatimende sesibhedlela esikhishwe ngoLwesine izithandani zaseWylie, eTexas besezisalelwe amaqanda amane okwenze ukuba uThomson acele ukubathwalela ingane yize eseneminyaka engu-7 agcina ukungena esikhathini.
Amaqanda afakwa esibelethweni sikaThompson ngo-Ephreli odlule.
AbakwaMcKissack bethe ingane igama elithi Kelcey okuhlanganiswe igama likagogo wayo nomama wayo. Ugogo nengane masesimeni esikahle.